1 Ndị Eze 7:1-51
7 Sọlọmọn ji afọ iri na atọ wuo ụlọ nke ya,+ o wee wuchaa ụlọ ya dum.+ 2 O wee wuo Ụlọ Oké Ọhịa Lebanọn+ nke dị otu narị kubit n’ogologo, na kubit iri ise n’obosara, na kubit iri atọ n’ịdị elu, n’elu ahịrị anọ nke ogidi osisi sida; e nwekwara osisi+ sida n’elu ogidi ndị ahụ. 3 E jikwa osisi sida kụchie ya+ n’elu ogidi ntụhie bụ́ ndị dị n’elu ogidi iri anọ na ise ahụ. Iri na ise dị n’otu ahịrị. 4 Ma e nwere ahịrị atọ nke windo ndị nwere awara, nweekwa oghere ìhè+ si abata nke chere ihu n’oghere ọzọ ìhè si abata, nke dị okpukpu atọ okpukpu atọ. 5 E ji osisi rụọ ọnụ ụzọ ya nakwa awara ụzọ ya niile ka ha nwee akụkụ anọ há nhata,+ tinyekwara ihu oghere ahụ ìhè si abata nke chere ihu n’oghere ọzọ ìhè si abata bụ́ nke dị okpukpu atọ okpukpu atọ. 6 O mekwara ka Ihe Owuwu Ụzọ Mbata nke Ogidi ahụ dịrị kubit iri ise n’ogologo, na kubit iri atọ n’obosara; ihe owuwu ụzọ mbata ọzọ dịkwa n’ihu ha, nke nwegasịrị ogidi na ihe mkpuchi n’ihu ha. 7 O wuru Ihe Owuwu Ụzọ Mbata nke Ocheeze+ ebe ọ ga-anọ na-ekpe ikpe, bụ́ ihe owuwu ụzọ mbata nke ikpe;+ ha jikwa osisi sida kụchie ya malite n’ala ya ruo ná ntụhie ya.+ 8 Ma ụlọ ya, bụ́ ebe ọ gaje ibi, nke dị n’ogige nke ọzọ,+ dịpụrụ adịpụ n’ebe ụlọ nke Ihe Owuwu Ụzọ Mbata ahụ dị. Ọ bụ otú a ka e si rụọ ya. E nwekwara ụlọ nke dị ka Ihe Owuwu Ụzọ Mbata a nke o wuuru ada Fero,+ bụ́ onye Sọlọmọn lụrụ. 9 E ji nkume dị oké ọnụ+ wuo ha niile dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ a chọrọ si dị, bụ́ nkume ndị a wapụtara awapụta, ndị e jikwa mma ịkwọ nkume kwọọ, n’ime nakwa ná mpụta, malite na ntọala ruo n’ebe o jedebere n’elu, nakwa ná mpụta ya ruo n’ogige ukwu ahụ.+ 10 Nkume ndị dị oké ọnụ e ji tọọ ntọala ya bụ nnukwu nkume, nkume ndị dị kubit iri, nakwa nkume ndị dị kubit asatọ. 11 E nwekwara nkume ndị dị oké ọnụ n’elu dị ka ọ̀tụ̀tụ̀ a chọrọ si dị, bụ́ ndị a wapụtara awapụta, tinyekwara osisi sida. 12 Ogige ukwu ahụ gbaa gburugburu nwere nkume a wapụtara awapụta dị ahịrị atọ,+ nakwa otu ahịrị osisi sida; otú a ka e nwekwara maka ogige ime+ nke ụlọ+ Jehova, nakwa maka ihe owuwu ụzọ mbata+ nke ụlọ ahụ. 13 Eze Sọlọmọn wee zie ozi si na Taya kpọta Haịram.+ 14 Ọ bụ nwa otu nwaanyị di ya nwụrụ nke si n’ebo Naftalaị, nna ya bụkwa onye Taya,+ onye na-arụ ọrụ ọla kọpa;+ o jupụtakwara n’amamihe na nghọta+ na ihe ọmụma e ji arụ ụdị ọrụ ọ bụla a na-eji ọla kọpa arụ. O wee bịakwute Eze Sọlọmọn ma malite ịrụ ọrụ ya niile. 15 O wee kpụọ ogidi ọla kọpa abụọ,+ nke ọ bụla n’ime ogidi ndị ahụ dị kubit iri na asatọ n’ịdị elu, eriri dị kubit iri na abụọ ga-agakwa nke ọ bụla n’ime ogidi abụọ ahụ gburugburu.+ 16 O ji ọla kọpa+ kpụọ ihe abụọ a ga-edokwasị n’elu ogidi ndị ahụ. Otu n’ime ihe abụọ ahụ dị kubit ise n’ịdị elu, nke ọzọ dịkwa kubit ise n’ịdị elu. 17 E nwere ihe ndị a kpara akpa, ihe ịchọ mma e ji ụdọ ígwè kpaa,+ maka ihe ndị ahụ a kpụkwasịrị n’elu ogidi ndị ahụ;+ asaa bụ maka otu n’ime ihe ndị ahụ a kpụkwasịrị n’elu ogidi ndị ahụ, asaa abụrụ maka nke ọzọ. 18 O wee mee ahịrị abụọ nke mkpụrụ pọmigranet gburugburu n’elu otu n’ime ihe ndị ahụ a kpara akpa iji kpuchie ihe ndị ahụ a kpụkwasịrị n’elu ogidi ndị ahụ; otú ahụkwa ka o mere ihe nke ọzọ ahụ a kpụkwasịrị n’elu ogidi ahụ.+ 19 Ihe ndị ahụ a kpụkwasịrị n’elu ogidi ihe owuwu ụzọ mbata ahụ yiri okooko lili,+ ọ dịkwa kubit anọ. 20 A kpụkwasịrị ihe ndị ahụ n’elu ogidi abụọ ahụ, ha dịkwa nso n’akụkụ ebe nupụtatụrụ enupụta, nke dị n’akụkụ ihe ahụ a kpara akpa; e nwekwara narị mkpụrụ pọmigranet+ abụọ n’ahịrị abụọ gbaa gburugburu ihe mkpukwasị nke ọ bụla. 21 O wee guzobe ogidi+ nke ihe owuwu ụzọ mbata+ nke ụlọ nsọ ahụ. O guzobere ogidi nke aka nri wee gụọ ya Jekin, guzobekwa ogidi nke aka ekpe wee gụọ ya Boaz. 22 E nwekwara ihe a rụrụ dị ka okooko lili n’elu ogidi ndị ahụ. Ọrụ ogidi ndị ahụ wee gwụchaa. 23 O wee rụọ oké osimiri a wụrụ awụ+ nke dị kubit iri malite n’otu akụkụ ọnụ ya ruo n’akụkụ ọnụ ya nke ọzọ. Ọ dị okirikiri; ọ dịkwa kubit ise n’ịdị elu, ọ na-ewe eriri dị kubit iri atọ iji tụọ ya gburugburu.+ 24 E nwere ihe ịchọ mma+ ndị yiri afụfa ọhịa+ n’okpuru ebe ọnụ ya gbaa gburugburu, bụ́ ndị gbara ya okirikiri, iri dị n’otu kubit, gbaa oké osimiri ahụ gburugburu,+ e nwekwara ahịrị abụọ nke ihe ịchọ mma ndị yiri afụfa ọhịa a wụkọtara ha na oké osimiri ahụ. 25 A dọkwasịrị ya n’elu oké ehi iri na abụọ,+ atọ chere ihu n’ebe ugwu, atọ echee ihu n’ebe ọdịda anyanwụ, atọ echee ihu na ndịda, atọ echeekwa ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ; oké osimiri ahụ dọkwa n’elu ha, ha niile dụnyere úkwù n’ime.+ 26 Igbidi ya hà ka uhiè ọbụ aka;+ a rụrụ ọnụ ya ka ọ dị ka ọnụ iko, dị ka okooko lili.+ Ọ na-aba+ puku ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat+ abụọ. 27 O wee jiri ọla kọpa mee ihe iri e ji ebu ihe,*+ nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ e ji ebu ihe dị kubit iri n’ogologo, na kubit anọ n’obosara, nakwa kubit atọ n’ịdị elu. 28 Otú a ka e si rụọ ihe ndị ahụ e ji ebu ihe: ha nwere akụkụ, akụkụ ha dịkwa n’agbata ígwè ndị e ji jikọta ha. 29 N’akụkụ ha ndị dị n’agbata ígwè ndị e ji jikọta ha, e nwere ọdụm,+ oké ehi+ na cherọb,+ ọ dịkwa otú ahụ n’elu ígwè ndị ahụ e ji jikọta ha. N’elu nakwa n’okpuru ọdụm na oké ehi ndị ahụ, e nwere ihe a kpara akpa+ nke dị okirikiri, nke e konyere ekonye. 30 Nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ e ji ebu ihe nwere ụkwụ anọ e ji ọla kọpa mee, bụkwa ndị e ji ọla kọpa mee ebe a kwụnyere ha; ihe dị na nkuku ha anọ na-ejikọ ha. N’okpuru efere ha ka e nwere ihe njikọ ndị ahụ, bụ́ ndị e ji ihe a kpara akpa kpụọ malite na nke ọ bụla gafee n’ọzọ. 31 Ọnụ ya kwa, malite n’ime ruo n’ihe njikọ ha gbagoo elu, dị kubit [?]; ọnụ ya dịkwa okirikiri, ya bụ, ihe ndọkwasị ihe a rụrụ nke dị otu kubit na ọkara, e nwekwara ihe a tụrụ atụ́ n’ọnụ ya. Akụkụ anọ ha hà nhata, ha adịghị okirikiri. 32 Ụkwụ anọ ahụ dị n’okpuru akụkụ ha, ebe a kwụnyere ụkwụ ndị ahụ dị n’akụkụ ihe ahụ e ji ebu ihe; ịdị elu ụkwụ nke ọ bụla dị otu kubit na ọkara. 33 A rụrụ ụkwụ ha dị ka e si arụ ụkwụ ụgbọ ịnyịnya.+ Ebe a kwụnyere ụkwụ ha nakwa okpuru ụkwụ ha na spok ha na ebe a ganyere spok ha, a wụrụ ha niile awụ. 34 Nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ e ji ebu ihe nwere ihe njikọ anọ n’akụkụ anọ ya; ihe njikọ ya na ihe ahụ e ji ebu ihe si n’otu ibé. 35 N’elu ihe ahụ e ji ebu ihe, e nwere ebe ịdọkwasị ihe nke dị ọkara kubit n’ịdị elu, ọ dị okirikiri; akụkụ ya na ahụ́ ya na elu ihe ahụ e ji ebu ihe si n’otu ibé. 36 Ihe ọ tụkwara+ ná mbadamba ahụ́ ya nakwa n’akụkụ ya bụ cherọb, ọdụm na nkwụ, dị ka ohere nke ọ bụla nwere si dị, tinyere ihe a kpara okirikiri ndị gbara ya gburugburu.+ 37 Ọ bụ otú a ka o si rụọ ihe iri ahụ e ji ebu ihe;+ otu ihe ka e ji kpụọ ha niile,+ ha hà nhata nweekwa otu ọdịdị. 38 O wee mee efere+ ọla kọpa iri. Ihe ga-eju efere nke ọ bụla bụ ihe ọ̀tụ̀tụ̀ bat iri anọ. Efere nke ọ bụla dị kubit anọ. E nwere otu efere n’elu nke ọ bụla n’ihe iri ahụ e ji ebu ihe. 39 O wee dọsa ihe ise e ji ebu ihe n’akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ, dọsakwa ise n’akụkụ aka ekpe nke ụlọ ahụ;+ ọ dọsakwara oké osimiri ahụ n’akụkụ aka nri nke ụlọ ahụ n’ebe ọwụwa anyanwụ, n’ebe ndịda ya.+ 40 Haịram+ wee mee efere+ na shọvel+ na ọkwá+ dị iche iche. E mesịa, Haịram rụchara+ ọrụ niile ọ nọ na-arụrụ Eze Sọlọmọn n’ihe banyere ụlọ Jehova: 41 Ogidi+ abụọ ahụ na ihe ndị ahụ bụ́ ndị yiri ọkwá+ a kpụkwasịrị n’elu ogidi abụọ ahụ nakwa ihe abụọ ahụ a kpara akpa+ iji kpuchie ihe abụọ ahụ dị okirikiri a kpụkwasịrị n’elu ogidi ndị ahụ, 42 na narị mkpụrụ pọmigranet+ anọ ahụ maka ihe abụọ ahụ a kpara akpa, ahịrị abụọ nke mkpụrụ pọmigranet maka otu ihe a kpara akpa, iji kpuchie ihe abụọ ahụ yiri ọkwá a kpụkwasịrị n’elu ogidi abụọ ahụ; 43 tinyere ihe iri ahụ e ji ebu ihe+ na efere iri+ ahụ dị n’elu ihe ndị ahụ e ji ebu ihe, 44 na oké osimiri+ ahụ na oké ehi iri na abụọ ahụ dị n’okpuru oké osimiri ahụ;+ 45 tinyere ite na shọvel na ọkwá na arịa ndị a niile,+ bụ́ ndị Haịram ji ọla kọpa na-egbuke egbuke rụọrọ Eze Sọlọmọn maka ụlọ Jehova. 46 Ọ bụ n’Ógbè Jọdan+ ka eze kpụrụ ha n’ala ụrọ, n’agbata Sọkọt+ na Zaretan.+ 47 Sọlọmọn atụghị arịa niile+ ahụ atụ̀ n’ihi otú ha si dị nnọọ ukwuu.+ A mataghị ịdị arọ nke ọla kọpa ahụ.+ 48 Sọlọmọn wee rụọ arịa niile metụtara ụlọ Jehova, ebe ịchụàjà+ e ji ọlaedo mee na tebụl+ nke achịcha a na-eche n’ihu Chineke na-adị n’elu ya, bụ́ nke e ji ọlaedo mee, 49 na ihe ndọba oriọna+ ndị e ji ọlaedo a na-agwaghị agwa mee,+ ise n’aka nri nakwa ise n’aka ekpe n’ihu ọnụ ụlọ dị n’ime ime, tinyere okooko+ ya na oriọna+ ya na ihe ndị e ji asọnyụ ọkụ,+ bụ́ ndị e ji ọlaedo mee, 50 na efere na ihe ndị e ji emenyụ ọkụ+ na ọkwá+ na iko+ na ihe ịgụ ọkụ,+ bụ́ ndị e ji ọlaedo a na-agwaghị agwa mee, na ebe e gwunyere ibo ụzọ+ nke ụlọ dị n’ime, ya bụ, Ebe Kasị Nsọ, na ibo ụzọ+ nke ụlọ nsọ ahụ,+ bụ́ ndị e ji ọlaedo rụọ. 51 N’ikpeazụ, ọrụ niile Eze Sọlọmọn nwere ịrụ n’ihe banyere ụlọ Jehova gwụchara;+ Sọlọmọn wee malite iwebata ihe ndị Devid nna ya mere ka ha dị nsọ;+ o wee tinye ọlaọcha na ọlaedo na arịa dị iche iche n’ebe a na-edebe akụ̀ n’ụlọ Jehova.+
^ Lee ihe e dere n’ala ala peeji ná 1 Ndị Eze 6:3.